Fiaran-tsambo sy trano famokarana vy any Sina | Jrain
Manamboatra fiara mifono vy sy fanaka ny mason-tsivana hamenoana izay takiana fitahirizana azy.
Ny fiara mifono vy sy sambo dia mora maivana, miorim-bolo ary azo antoka fa maimaimpoana.
Tambaonan'ny Vataben'ny tranombarotra sy ny Vessels hatramin'ny 4500mm ny savaivony ary 200m³ ny boky.
Ny kamiao lehibe lehibe hatrany amin'ny 25000mm ny savaivony ary amboarina eo amin'ny sehatry ny tetikasa.
Ireo fiara mifono vy sy fanaka, anisan'izany ny singa fanampiny, dia azo asiana endriny na ny endriny na ny fanitsiana, izay mampiseho ny fahaiza-manao miavaka miaraka amin'ny composite FRP.
Mampiasa ny haitao ara-teknolojia, manana hery manamboatra fiara mifono vy sy sambo izahay araka ny fepetra takian'ny mpanjifa ao amin'ny zavamaniry avy eo ary ampandehanana soa aman-tsara any amin'ny tranokalanao izy ireo.
Ho an'ireo fiara mifono habe lehibe kokoa, manana ny toetra tsy manam-paharoa isika amin'ny fananganana eo an-toerana amin'ny toerana voafaritra azonao atao, ary mahatratra 25m ny savaivony farany.
Ny vokatra azontsika dia aseho amin'ny:
• Miaro tanteraka amin'ny zavatra simika isan-karazany, tontolo manimba, ary hazavana ultraviolet
• Ny tanjaky mekanika avo ary ny lanja ambany
• Manomeza insulation mafana mafana miaraka amin'ny hafanan'ny hafanana ambany rehefa voatsindrona
• Azo omena miaraka amin'ny liner fitondran-tena vita amin'ny fibre karbonina ary liner-tahan-mihetsika tsy mahomby i Sic
• Azo omena amin'ny sokajy afo isan-karazany sy amin'ny loko isan-karazany
• Fepetra tsara kalitao sy vidin'ny vokatra tsara
Ny endri-javatra famolavolana Tank dia:
• feno CAD & FEA famoronana sy fahaiza-manao injeniera amin'ny famolavolana mahazatra
• Azo ampiasaina miaraka amin'ny liners voamarina FDA na NSF-61 voamarina
• Azo ampiasaina amin'ny takelaka vita amin'ny abrasion
• Ambony ambanin'ny tany sy fiara ambanin'ny tany ao amin'ny FRP
• fiara vaika ambany ambany
• Ny fitoeran'entana entona mando lava any amin'ny tongotra FRP (na vy)
• fiara mifono fiakarana ao amin'ny FRP (na vy, na tsy misy)
• silos ambany miloko (60 ° sy 90 °)
• tanky varotra misy koveta iraisana
• tanki-pirindrana mihetsika mitsangana na mitsivalana
Ny akora sy ny dingana lehibe:
• VE Resin, Iso Resin • C-fonona, fisalobona sintétika, fisalobona karbona
• E-Glass, ECR fitaratra, matotra, rafi-pitsaboana MEKP na BPO / DMA
• Famelon-keloka, poti-tànana ary fananganana fananganana tanana
Previous: Tavy fitobiana
Fiberglass Vessels sy tank
Vilany sy tank
Ny fomba mazàna ho an'ny fiara fitaterana lehibe habe dia: 1. Manosika ny ekipa mpanamboatra ary manendrena Project Manager; Alefaso ny milina sy fitaovana hanampiana ny sahanasa. 2. Ampifandraiso amin'ny milina fanamboarana sy famolavolana ny môtô ho an'ny marika. 3. Manaova liner ary manaova fanamafisana araka ny angon-drindrina. 4. Manongotra ary avy eo mametraka ny tankina amin'ny toerana mety. 5. Amboary ny fametahana toy ny nozzles, tohatra, fanidiana, sns, ary ataovy hydrostat ...
Nohavaozina Fiberglass, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, hamolavola, Masinina fanamafisana GRP, Mamatotra fanamafisana FRP, Famolavola grating,